Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta Ntsay : Tsy misy azo esorina
Governemanta Ntsay : Tsy misy azo esorina
Herin-taona eo izao no niandrasan’ny sokajin’olona maro ny tokony hanavaozana ny mpikambana maro ao amin’ny governemanta Ntsay Christian fa tsy nisy izany hatramin’izao. Herin-taona toa izao mantsy, niharihary ny tsy fahaiza-miasa sy ny tsy fananana politika matotra itantanana ny raharaham-panjakana raha vao tafiditra ambolana vitsy teto ny aretina coronavirus. Ny herin-taona sy tapany nitantanan’ny governemanta Ntsay Christian ny tany sy ny fanjakana tamin’izay dia tsinjo fa nahavita nifehy ny fahefam-panjakana teo aminy izy ireo na tsy nisy akony tsara loatra tany amin’ny fiainam-bahoaka aza. Ny fahaiza-mitana fanjakana no zava-dehibe fa ny ankoatra izay dia haingonkaingony fotsiny. Isan’izany ny fanarenana ny fiainam-bahoaka, izay tsy voatery ho laharam-pahamehana
Tamin’ny taona vaovao tamin’ity 2021 ity dia ny talen’ny kabinetra sivilin’ny fiadidiana ny Repoblika no nanambara tamim-pomba ofisialy fa “tsy hisy fanovana mpikambana ao amin’ny governemanta aloha ato ho ato”. Indro tokoa fa mbola nomena andraikitra momba ny fampisongadinana ny asan’ny fitondram-panjakana sy nasaina nandrafitra ny “teti-pivoarana ho amin’ny fanandratana an’i Madagasikara” (Plan emergence de Madagascar) avy ireo Minisitra isanisany.
Tamin’izany dia efa nilaza izahay fa “tsy hisy mihitsy raha izany, ary tsy ilaina ny fanovana fa hamafiso ny fitokisana an’ireo minisitra ireo fa ireo no tena mahavita azy”.
Amin’izao fotoana, efa re fa akaiky ny ho fanovana saingy ireny tranga tany Taolagnaro ny zoma sy sabotsy teo ireny dia mampibaribary fa “ireo minisitra rehetra mandrafitra ny governemânta Ntsay Christian ireo no hiantoka ny fanatanterahana hatrany ireo tetik’asa isan-tsokajiny manerana ny Nosy, ka ampahany iray amin’izany ny fanavotana sy fanarenana ny faritra atsimon’ny Nosy”. Raha ny fitazana ny toe-draharaha dia ireo mpikambana ao amin’ny governemantra ireo sy ny mpiara-miasa akaiky aminy avy (tale jeneeraly, sekretera jeneraly, tale isan-tokony) no azo antoka indrindra hampahomby ny fampandaniana ny filoha Rajoelina amin’ny 2023 satria ireo no hahavita mampivaingana ny tena fanarenam-pirenena sy ny tena fampanjariana ny fanondrotana ny fari-piainam-bahoaka.
Marina fa tsy laharam-pahamehana ny fifidianana amin’ny 2023 satria mbola ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana ary ny ady amin’ny fananganana fotodrafitrasa, ny ady amin’ny fampahantrana izao no maika, ka dia ireo no afaka hiantoka izany. Na inona na ahoana koa anefa dia randran-tarihina izany satria raha hanova ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ny filoha dia hitarazoka indray ny famitana ireo velirano sy tetik’asa hiampitana any amin’ny fifidianana 2023, na tsy hahavita na inona na inona hatrany aza ireo efa eo. Mahavita azy ireo minisitra isan-tokony ireo ka aza misy esorina ary afaka miantoka ny fahalanian’ny filohampirenena ankehitriny amin’ny fifidianaa 2023 ireo ka aza mihaino ny vavan’ny mpananty ran-kena.